MinSayYar - Page 1198 of 1220 -
သူများဝေတဲ့ထမင်းဘူးကို လမ်းဘေးမှာစားပြီး အမေစုကိုဝန်းရံခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်
အနုပညာလောကထဲမှာ ခြေချလာတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ စမိုင်းလ် တယောက်ကတော့ လက်ရှိမှာ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ရင်း ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုနဲ့ အတူတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စမိုင်းလ်ကတော့ သူ့အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေ အားကျရလောက်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ မိသားစုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပြီး အမြဲတမ်းလိုလို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့ သူ တယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စမိုင်းလ်ကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေး နှယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသမီးလေးတွေကလည်း လက်ရှိချိန်မှာကတည်းက အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။စမိုင်းလ်တို့မိသားစုလေးက ခရီးတွေလည်းမကြာခဏသွားတတ်သလိုသွာတဲ့ခရီးတိုင်းမှာ အလန်းစား ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်တတ်တဲ့စမိုင်းလ်ကို ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးက အားကျနေရတာပါ။ စမိုင်းလ်ဟာ မျိုးချစ်စိတ်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချစ်မြတ်နိုးလေးစားအားကျတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲမှာတစ်ဦးအပါအဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ စမိုင်းလ်က မကြာသေးမီရက်ပိုင်းကမှ ICJ တရားရုံးမှာ အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဝန်းရံဖို့ အမ်စတာဒမ်အထိလိုက်သွားပြီး အမေစုကိုအားပေးထောက်ခံပြီးစုရုံးနေတဲ့ သူတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာအားပေးနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ […]
သူများလာဝေတဲ့ထမင်းဘူးကို လမ်းဘေးမှာထိုင်စားပြီး အမေစုကိုဝန်းရံခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်
ဆိုရှယ် မီဒီယာ အသုံးပြုသူတွေကို တောင်းဆိုမူ တစ်ခု ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ Zenn Kyi
Zawgyi Font ဖြင့်ဖတ်ရန် ကျနော် ရခိုင်အရေးစဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ mainstream media တွေ မြန်မာနိုင်ငံကိုစပြီး တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ page တွေအောက်မှာ ထိရောက်သည်ဖြစ်စေ မထိရောက်သည်ဖြစ်စေ comment section တွေမှာ ချက်ကျလက်ကျ fact တွေ link တွေနဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ပြောတဲ့ထဲမှာ မှားတာတွေရော မှန်တာတွေရော ပါပါတယ်။ မှားတာတွေပိုများပါတယ်။ မနေ့က ICJ မှာအဖွင့်အဆိုပြုခြင်းတွေအတိုင်းပါပဲ ယနေ့ကမ္ဘာမှာမြန်မာကိုထင်တဲ့မြင်တဲ့အမြင်က ဗုဒ္ဓဘာသာအစွန်းရောက်တွေနေတဲ့နိုင်ငံ၊ ပြီးတော့ အင်မတန်မယဉ်ကျေးတဲ့ မိုက်ရိုင်းတဲ့လူတွေနေတဲ့နိုင်ငံဆိုပြီးတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစွန်းရောက်ကိစ္စကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း မီးမွှေးတဲ့သူတွေရှိတယ် မီးရှို့တဲ့သူတွေရှိတယ်။ အဲ့ဒီ့ထဲပါသွားတဲ့ အစစ်တွေလည်းရှိတယ်။ ဆိုတော့ အဲ့ဒီ့ကိစ္စကတော့ တော်တော်လေးရှင်းရခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်အရှိကိုအရှိအတိုင်းပဲ comment section တွေမှာ ပြောပြခဲ့တယ်။ ဘယ်သူမှမယုံပါဘူး။ ဒါကခဏထားပါ။ […]
ထောင်ချီတဲ့ရထားစီးပြည်သူများအတွက်ပြန်ပြီးဝေမျှပေးကြပါ (ရထားအချိန်စာရင်း နဲ့ ရထားလက်မှတ် တန်ဖိုး)
တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ ရထားအချိန်စာရင်း နဲ့ ရထားလက်မှတ် တန်ဖိုးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပြီနော် (ရန်ကုန် မှ မန္တလေး) မနက်အမြန်ရထား နံနက်6:00 AM / ရိုးရိုးတန်း – 4650ကျပ် / အထက်တန်း – 9300ကျပ် —- လေအိတ်ရထား ညနေ 3:00 PM / ရိုးရိုးတန်း – 4650ကျပ် / အထက်တန်း – 9300ကျပ် — ည အမြန်ရထား ညနေ 5:00 PM / ရိုးရိုးတန်း – 4650ကျပ် / အထက်တန်း – 9300ကျပ် (မန္တလေး မှ ရန်ကုန်) မနက်အမြန်ရထား မနက် 6:00 […]
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးသို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှင်းလင်းတင်ပြချက်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးသို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှင်းလင်းတင်ပြချက် (သည်ဟိတ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်) ၁။ သဘာပတိကြီးနဲ့ တရားသူကြီးများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးတာဝန်ဖြင့် ကမ္ဘာ့ရုံးတော်ကြီးမှာ ယခုလို ပါဝင်တက်ရောက်ရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူမိ ပါတယ်။ ရုပ်ဝတ္တုပိုင်းအရကြွယ်ဝမှုအားနည်းတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလို နိုင်ငံငယ်တွေအဖို့ ဒီရုံးတော်ဟာ နိုင်ငံတကာတရားမျှတမှုအတွက် ခိုနားအားထားရာနေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့အနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂပဋိဉာဉ်စာတမ်းပါ ပင်မဉီးတည်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေများနဲ့စာချုပ်စာတမ်းများအရ လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိတဲ့ ကတိကဝတ်တွေကို လေးစား လိုက်နာမှုရှိစေနိုင်မယ့် အခြေအနေကောင်းတွေ ချမှတ်ပေးဖို့အတွက် ဒီရုံးတော်ကို မျှော်ကိုး အားထားရပါတယ်။ သဘာပတိကြီးရှင့် – ၂။ ယခုအမှုကိစ္စဟာ လက်ရှိ […]
အမေနေ့ (သို့မဟုတ်) ပြာသိုလပြည့် အမေများနေ့
Zawgyi Font ဖြင့်ဖတ်ရန် အမေနေ့ (သို့မဟုတ်) ပြာသိုလပြည့် အမေများနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ၌ အမေများနေ့ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ. . . မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမေများနေ့ကို ကျင်းပ ပြုလုပ်ကြသည်မှာ နှစ်ပိုင်းမျှသာ ရှိပါသေးတယ် ။ ဆယ်စုနှစ်ပိုင်းမျှ ဖြစ်သည် ။ ယခုအခါ အထိုက်အလျှောက်တော့ လူသိများလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ မြန်မာပြည်အဖို့ ပြာသို လပြည့်နေ့ ၊ နှင်းအိဆွတ်မြ အေးချမ်းသောလ ဆောင်းကာလတွင် ၊ အမေများနေ့အဖြစ် ၊ သတ်မှတ်ကြပါသည်. . . ဆရာကြီးဦးသုခက အမေများနေ့ကို စတင်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်… ဦးသုခသည် ငယ်စဉ်ကာလက မိခင်ကြီးကို ၊ ကျိုက်လတ်တွင် ထားခဲ့ပြီး ၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေလုပ်ကိုင်နေရလေရာ သားကို […]
မျက်မမြင်တဲ့ မိဘကို ဆေးကုပေးမယ်ဆိုပြီး လိမ်ခေါ်ပြီး ရက်စက်စွာ စွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ သားသမီးများ
မျက်မမြင်တဲ့ မိဘကို ထိုင်းမှာ ဆေးကုပေးမယ်ဆိုပြီး လိမ်ခေါ်ပြီး ရက်စက်စွာ စွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ သားသမီးများ မြန်မာ သမိုင်းဇာတ်တော်တွေထဲက ရှင်မောဂ္ဂလန် လူ့ဘဝတုန်းက မိဘဖြစ်သူတွေကို ဆွေမျိုးတွေဆီ အလည်သွားရအောင်ဆိုပြီး တောလမ်းတစ်နေရာ အရောက်မှာ သူခိုး၊ဓားပြတွေ လာပြီဆိုပြီး မိဘအရင်းတွေကို ရိုက်နှက်စွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို အားလုံး ကြားဖူးကြမှာပါ။အဲ့ဒီအကြောင် းကိုတောင် အဆိုတော်ခွန်ပေါရမ်းက သီချင်းလုပ်ဆို ထားပါသေးတယ်။ လူတွေဟာ ငယ်ငယ်တုန်းက ကျွေးမွေးခဲ့တဲ့ မေတ္တာကိုမှ မထောက်ပဲ မိဘတွေကို စွန့်ပစ်ကျဖို့ ဝန်မလေးကြတာ တော်တော် စိတ်မကောင်းစရာပါ။အခုလည်း တာချီလိတ်မှာ မျက်မမြင်တဲ့ မိဘကို ထိုင်းမှာ ဆေးကုပေးမယ်ဆိုပြီး လိမ်ခေါ်လို့ လမ်းမှာ စွန်ပစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးတစ်ခုကို အားလုံး သိအောင် မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ လူမှုကွန်ရက် အသုံးပြုသူ ကိုဇော် ဆိုသူက […]
ပြိုင်ဘက်ကစားသမားအသက်ကို ကယ်တင်ခဲ့ပြီး ရွှေတံဆိပ်ကို လက်လွှတ်ခဲ့သူ
ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအ အဆိုပါသတင်းက တော်တော်လေးပြန်နှံ့နေခဲ့ပြီး ကက်စူဂေးကလည်း သူရဲကောင်းတစ်ဦးအဖြစ် ချီးကျူးခံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်မှာ ကျင်းပနေတဲ့ ၂၀၁၉ အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာတော့ ကစားသမားတိုင်းက သူရဲကောင်းတွေအဖြစ်နဲ့ နိုင်ငံတော်အတွက် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နေကြပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲကြီးမှာ သမိုင်းဝင်အခိုက်အတန့်တွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်ရေလွှာလှိုင်းစီးကစားသမားတစ်ဦးကတော့ အခုချိန်မှာ သူရဲကောင်းတစ်ဦးအဖြစ် ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ရော်ဂျာကက်စူဂေးလို့ အမည်ရတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်ကစားသမားက ပြိုင်ဘက်အင်ဒိုနီးရှားကစားသမားနူဟီဒါရက် ရေနစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်ခံပြီးတော့ ပြိုင်ဘက်ကစားသမားကို ကယ်တင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအ အဆိုပါသတင်းက တော်တော်လေးပြန်နှံ့နေခဲ့ပြီး ကက်စူဂေးကလည်း သူရဲကောင်းတစ်ဦးအဖြစ် ချီးကျူးခံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေတံဆိပ်ဆုအတွက် ပြိုင်ဆိုင်နေခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နူဟီဒါရက်ရဲ့ ရေလွှာလှိုင်းစီးဘုတ်ပြားဟာ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီး လှိုင်းလုံးတွေကြားကို ရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကက်စူဂေးက ကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကစားသမားနှစ်ဦးဟာ ဘုတ်ပြားတစ်ခုတည်းအပေါ်မှာ နှစ်ယောက်အတူတူ ရှိနေခဲ့ပြီး […]
ပင်စင်လစာတွေ စုပီး လူထု အကျိုးပြုစေမယ့်တံတားကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့သူ
ကမ္ဘာပေါ်ကနေရာတိုင်းဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးလည်း ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်နေဖို့ဆိုတာ အခုအချိန်အထိတော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ မမျှတဘူးပဲပြောပြော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ ဒေသတွေဟာဆိုရင်လည်း လူနေမှုကအစ အရမ်းမြင့်မားနေသလို မပြည့်စုံတဲ့ဒေသတွေကျပြန်တော့လည်း တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာကို သွားဖို့လာဖို့တောင် အနိုင်နိုင်ရယ်ပါ။ အစိုးရဖက်ကလည်း တတ်နိုင်သလောက် လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးချာမွေ့အောင် လမ်းတွေပြုပြင်၊ တံတားတွေတည်ဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း အခြေအနေအကြောင်းကြောင်းကြောင့် မပြီးမစီးနိုင်တာတွေ၊ လုပ်ငန်းမစနိုင်သေးတာတွေဖြစ်လို့နေပါတယ်။ အဲဒီလိုဒေသတွေထဲ အိန္ဒိယနိုင်ငံက အိုဒီရှာက ကန်ပွားရွာလေးလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ကမ်ပွားရွာနဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ တခြားရွာ ၆ ရွာလောက်ဟာ စီးပွားရေးအရပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားအခြေအနေတွေကြောင့်ပဲဖြစ် တစ်နေရာကတစ်နေရာသွားချင်ရင်ဒါမှမဟုတ် မြို့ပေါ်သွားချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆို တောတွေချောင်းတွေထဲကဖြတ်ပြီး ခက်ခက်ခဲခဲ ခရီးသွားကြရပါတယ်။ လမ်းခရီးဟာ ကြမ်းတမ်းပြီး မတေ်ာတဆမှုတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်လည်း အဲဒီဖြတ်လမ်းကလွဲပြီး ကျန်တဲ့လမ်းက မပေါက်ပြန်တော့ အချိန်ပင့်စေမယ့် ဖြတ်လမ်းကိုသာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်အသုံးပြုခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြောင့် ရွာနားနီးစပ်တွေဆီက ငွေကြေးစုဆောင်းပြီး တံတားဆောက်ပေးနေခပမယ့်လည်း ငွေကြေးအခက်အခဲတွေကြောင့် တံတားကြီးဟာ ဆောက်လက်စအနေအထားမျိုးနဲ့ […]
ICJ မှာ ပြောခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကောင်းဆုံး လျောက်လဲချက်
Zawgyi Font ဖြင့်ဖတ်ရန် မြန်မာတပြည်လုံးက သူမရဲ့ မိန့်ခွန်းကို နားထောင်နေကြမှာပါ။ အခုတင်ပေးထားတာကတော့ မြန်မာဘာသာပြန်ပါ။ တိုက်ရိုက် English လို ပြောတာက ပိုပီးတိကျလို့ သူမ ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ တိုက်ရိုက်နားထောင်လိုက်ပါတယ်။ သိပ်ကို လှပ ညင်သာပါတယ်။ ဒီချေပချက်မှာ ဘယ်ဘက်ကိုမှ အပြစ်တင်မသွားဘူး။ တပ်ကိုလဲ အပြစ်ပုံမချဘူး။ ဆဲဆိုမိတဲ့ ပြည်သူတွေကိုလဲ ကာကွယ်သွားတယ်။ တဖက်က ခံစားရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလဲ နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူး ဘာဘူးနဲ့ အပြစ်မတင်သွားတဲ့အစွန်း ၃ဖက် လွတ်တဲ့ပြောကြားချက်ပါ။ နားထောင်ဖူးသမျှ အမေစု မိန့်ခွန်းထဲ ကောင်းလွန်းလို့ သြချမိရတဲ့အထိပါ။ ပထမဆုံးက ဒါဟာ ရဝမ်ဒါက အခြေအနေနဲ့ မတူညီကြောင်း ရှင်းပါတယ်။ ခရိုအေးရှားနဲ့လဲ မတူညီကြောင်းပြောပါတယ်။ နောက်ပီးတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ AA နဲ လက်ရှိတပ်နဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ […]
Previous 1 … 1,197 1,198 1,199 … 1,220 Next